“ဝတဲ့သူတွေ နှင့် ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး အိပ်ပျော်နေရင်း သေတတ်တဲ့ ရောဂါ ၊ OSA အကြောင်း” – စွယ်စုံသုတ
“ဝတဲ့သူတွေ နှင့် ဟောက်တတ်တဲ့သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး အိပ်ပျော်နေရင်း သေတတ်တဲ့ ရောဂါ ၊ OSA အကြောင်း”
ကျွန်တော့်အတွက်တော့…. အိပ်စက်ခြင်းဆိုသည်မှာ သေမင်း နှင့် စစ်ခင်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆရာဝန်မှ ပြောလာသောအခါ…
၂၃သိန်းခွဲတန် အသက်ရှူစက် ကို ညစဉ် အဖော်ပြုအိပ်စက်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာ ရလေတော့သည်။
ကျွန်တော့်ကို ပမာထား၍ မိတ်ဆွေတို့လည်း ဆင်ခြင်ကြကုန်လော့…။
အိပ်စက်ရင်းနဲ့ သေဆုံးခြင်း မဖြစ်အောင်… အရွယ်မတိုင်ခင် သွေးတိုး ၊ လေဖြတ် ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် ၊ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင်…
ဟောက်လည်းဟောက် ဝလည်းဝတဲ့ မိတ်ဆွေများ (**မဝပဲ ဟောက်တဲ့သူတွေ မှာလည်း ရောဂါရှိနိုင်ပါတယ်) လုံးဝ မပေါ့သင့်ပဲ Sleep Test လုပ်၍ လိုအပ်သလို ကုသမှု ခံယူသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆိုလည်း “ဒါလေးက ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့တန်တန် နေခဲ့တာ ၇နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။
သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် နဲ့ပြပြီး လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုခံယူလိုက်ပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်အန္တရာယ် နဲ့ ဘယ်လောက်တောင် နီးကပ်နေသလဲ ဆိုတာသိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Obstructive Sleep Apnea (OSA) ဆိုတာမျိုးက အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကျမှ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ပိတ်.. ပိတ်သွားတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပြီး နိုးနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပဲ ပုံမှန်အတိုင်း ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရောဂါဖြစ်နေတာ ကို ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
Sleep Test စစ်ဆေးချက်အရ ကျွန်တော် အိပ်နေတုန်း စက္ကန့် ၁၀၀ အထိ(စက္ကန့်၂၀၀ ကျော်ရင်သေပါတယ်) လုံးဝ အသက်ရှူရပ်သွားတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း တညမှာ ၁၂၆ကြိမ်ရှိပါတယ်။
အဲ့တာကို အရင်တုန်းက အလေးအနက်ထားပြီး စစ်ဆေးကုသဖို့ မကြိုးစားတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိပါဘူး။ ကံကောင်းလို့ မသေသေးတာပါ။
ဒါပေမဲ့ OSA နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် မနှစ်ကစပြီး သွေးတိုးရောဂါ စဖြစ်လာပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့… ကျွန်တော့်အသက်က ၃၇ နှစ်ပါ။ သွေးတိုးကမျိုးရိုးလည်းမရှိပဲ ကျနော့်အတွက် စောပါသေးတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်တော်သာ လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု မပြုလုပ်ရင် အိပ်နေရင်းမသေရင်တောင် မကြာခင်မှာ လေဖြတ်တာ၊ နှလုံးရပ်တာ ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တာတွေ အထိ ဖြစ်သွားနိူင်ပါတယ်။
OSA ဆိုတဲ့ရောဂါက ဝ တဲ့သူတွေမှာ အဖြစ်များတာမှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့… ဝိတ်သာချလိုက်ပါ…ရောဂါပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် လို့ လွယ်လွယ်ပြောရုံနဲ့ ပြဿနာက ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရောဂါအတိမ်အနက် ပေါ်မူတည်ပြီး အသက်ရှူစက် CPAP တပ်ပြီးအိပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေတပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဝိတ်ချတာက နောက်ကိစ္စပါ။ ဝိတ်ကျတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေလို့ မရပါဘူး။ ဝိတ်ချဖို့စဉ်းစားနေတုန်း ကိစ္စတုံးသွားတဲ့သူတွေ အများကြီးပါပဲ။
OSA ရောဂါရှိနိုင်တယ်လို့ သံသယစရှိတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်ကတည်းက….
“ဟာ…ပြဿနာမရှိပါဘူး…ဝိတ်ပဲချလိုက်မယ်… ပိုက်ဆံကုန် တယ်… အိပ်ရတာလည်းခက်တယ်…စက်တပ်ပြီးတော့ မအိပ်နိုင်ဘူး” လို့ဆိုပြီး ဆေးခန်းက အဖြေမထွက်ခင်အထိကိုကျနော် ခေါင်းမာ နေခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် စစ်ဆေးချက်အဖြေရတဲ့အခါ ဆရာဝန် နဲ့ ပြလိုက်တော့မှ ကျနော့်ရဲ့ အခြေအနေက တည တောင်ထပ်စောင့်လို့မဖြစ်ဘူး ဆိုတာကို လက်မခံချင် ပဲ လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ (တနှစ်အတွင်း ဝိတ်လည်း တကယ် မချဖြစ်တဲ့အပြင် ပိုတောင်တက်လာပါသေးတယ်)
ကျနော်ကတော့ ဆရာဝန်ဆီက ပြန်ပြန်ပြီးချင်းပဲ CPAP စက်ဝယ်ပြီး မနေ့ညက စက်တပ်ပြီး စအိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ကောင်းလို့လားတော့ မသိဘူး… အိပ်ရတာ တွေးထင်ထားသလိုမျိုး ခက်ခက်ခဲခဲကြီး မဟုတ်ပါဘူး။
မနက်လင်းတော့ ဇနီးသည်က ကျနော့်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်။
သူ့ခမျာ အိမ်ထောင်သက် ၇ နှစ်လုံးလုံး ကျနော့်ရဲ့ အပြင်းစားဟောက်သံတွေ ကို ညတိုင်းသည်းခံပြီး အိပ်ခဲ့ရရှာတာပါ။ မနေ့ညကစပြီး သူဝဋ်ကျွတ်သွားပြီပေါ့ဗျာ…😘😘😘။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် OSA ဆိုတာ နေ့လည် ထမင်းစားပြီး ခဏငိုက်မိတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာတင် သေနိုင်တဲ့ … မသေရင်လည်း နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ များတဲ့… တကယ့်ကို အသံတိတ်လူသတ်သမား (Silent Killer) အကြီးစား ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ကို သတိပြုမိစေလိုပါတယ်။
အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့် ယခုပို့စ်အား ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။
(ကျနော်ပြတဲ့ဆေးခန်းက အာရှတော်ဝင် အရှေ့က သီတဂူ Asia Royal Sleep Lab ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်း ပြဖို့မေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ 09443993636 ကို ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ဆေးခန်းနှင့် ကျနော် မည်သို့မျှ ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ယခုပို့စ်တင်အပြီးမှာ ကျနော့်ကို ဘယ်မှာပြရမလဲ လို့ မေးတဲ့သူတွေ များလာတဲ့အတွက် ကျနော်ပြတဲ့ ဆေးခန်း အကြောင်း ဝေမျှ ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်)
OSA ရောဂါ နဲ့ ဖြတ်သန်းနေ/ခဲ့ရတဲ့ ရောဂါအတွေ့အကြုံ အကြောင်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေး ဝေမျှ အားပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး group တခုဖွဲ့ထားပါတယ်။
OSA ရောဂါသည် အချင်းချင်း အပြင်….ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေတွေ.. တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန် နဲ့ ကုသရေးပညာရှင်တွေ.. ဒါမှမဟုတ်… ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိသူ… စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို… ဒီလင့်မှာ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Credit :Richard Nay Lin